‘सेप्टेम्बर ११ पछि प्राथमिक कागजात नै छुटेमा ग्रिनकार्ड आवेदन सिधै अस्वीकृत हुनसक्छ’ « Khasokhas Follow @khasokhasmag
‘सेप्टेम्बर ११ पछि प्राथमिक कागजात नै छुटेमा ग्रिनकार्ड आवेदन सिधै अस्वीकृत हुनसक्छ’
– केशवराज सेडाई, कानुन व्यवसायी
थप कागजातको अवशरविनै आवेदन अस्वीकार गर्नसकिने नयाँ नियम के हो ?
पहिले कुनै पनि आवेदन युएससीआईएसमा दिंदा थप कागजातको अनुरोध ९च्भत्रगभकत ायच भ्खष्मभलअभ च्ँभ्० वा अस्वीकार गर्ने आशयको सुचना ९ल्यतष्अभ या क्ष्लतभलत तय म्भलथ ल्इक्ष्म् ० जारी गरेर आवेदकलाई थप कागजात पेश गर्ने मौका दिइन्थ्यो । सेप्टेम्बर ११ पछि युएससीआईएसका अधिकारीहरुले आरएफई वा एनओआईडीविना नै आवेदन अस्वीकार गर्नसक्नेछन् । तर आरएफई वा एनओआईडी जारी गर्दै नगर्ने भने होइन । उदाहरणका लागि विद्यार्थीले कलेज ट्रान्सफर गर्दा उचित आई ट्वान्टी, सिभिज शुल्क तिरेको रिसिप्ट, राम्रोसँग भरिएको आई ५३९ आवेदन र शुल्कतिर्ने क्षमता भएको आर्थिक कागजात बुझाउनुपर्छ । तर आर्थिक कागजात वा कुनै कागजात छुटेको भएमा सरकारी अधिकारीले कागजात छुटेको सुचना दिएर बुझाउन सुझाव नदिइकनै सिधा आवेदन अस्वीकार गर्न सक्नेछन् । मौका दिनपनि सक्छ, नदिन पनि सक्छ । पहिले दिनैपर्ने थियो । अब अधिकारीको तजबिजमा भरपर्ने भयो । विवाहमा आधारित, रोजगारमा आधारित वा परिवारमा आधारित ग्रिनकार्ड आवेदनमा पनि यो नियम लागु हुनेछ । उदाहरणका लागि आई १३० फाइल गर्दा विवाहको प्रमाणपत्र पेश गरिएको छैन, दाजुभाईका लागि फाइल गर्दा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र छैन भने अधिकारीले अर्को मौका विना पनि आवेदन अस्वीकार गर्न सक्छन् । प्राथमिक प्रमाण नै नभएको अवस्थामा आवेदन सिधा अस्वीकार गर्न सक्छन् । एक्स्ट्रा अर्डिनरी ग्रिनकार्ड आवेदन दिंदा मेरिट देखिएन भने पनि सिधै अस्वीकृत हुनसक्छ ।
एचवान फाइल गर्दा वा ईबीवान लगायतका श्रेणीमा ग्रिनकार्ड जारी गर्दा थप कागजातको मौका दिने गरी असाध्यै धेरै आरएफईहरु जारी हुन्थे, अब त्यो कम हुने भयो ?
कुनै पनि आवेदन दिंदा आधारभूत कागजातहरु पेश गर्नैपर्छ । सुरुमा हेर्दा त्यो आवेदन स्वीकृत गर्न योग्य नै नहुनेगरी कागजात छुटाउनु भएन । प्राथमिक कागजात नै सुरुमा पेश गर्न छुटाएमा आवेदन अस्वीकृत हुँदा समय र पैसामात्र खेरजाने होइन, अर्को स्टाटसमा जाँदा कागजपत्रविहिन हुने खतरा समेत रहन्छ । कागजपत्रविहिन हुनासाथ देशनिकालाको प्रकृयामा जाने सम्भावना रहन्छ ।
वजन नै नभएका आवेदनहरु धेरै फाइल हुँदा अध्यागमन बोझिलो भएकाले बोझ हटाएर राम्रा आवेदनबारे छिटो फैसला दिन यसो गरिएको भनिएको छ । अब राम्रा आवेदनबारे छिटो फैसला होला ?
ट्रम्प सरकारले अध्यागमन नीतिहरुलाई धेरै कडा बनाएको छ । निगरानीहरु पनि बढाइएको छ । यो निगरानीमा सबै आवेदनलाई कडा रुपले हेरिनेछ । स्वीकृत दर पनि कम हुने सम्भावना देखिन्छ । पहिलो कमजोर केसलाई अस्वीकृत गर्ने आशयको कागजात दिइने गरेकोमा त्यस्ता केस अब सिधा अस्वीकृत हुने सम्भावना छ । आवेदकले पूरा तयारीका साथ आवेदन दिन जरुरी छ । यदि कोही विद्यार्थीभिसाबाट एचवानबीमा जाने क्रममा रोजगारदाताले आफूसँग काम भएको प्रमाणित गर्नुपर्छ । त्यस्तो प्रमाणित गर्ने कागजात पठाउन नसकेको खण्डमा आवेदन सिधा अस्वीकृत भएर विद्यार्थी भिसामा रहेको व्यक्ति कागजपत्रविहिन पनि हुनसक्छ । त्यसैले यो गम्भीर प्रकृतिको अवस्था छ । त्यसैले होमल्याण्ड सेक्युरिटीमा आवेदन दिंदा तीनचारपटक राम्रोसँग आफैले हेरेर आवेदन दिनुपर्छ । यो नियम सेप्टेम्बर ११ देखि लागु हुने भएपनि अहिले नै आवेदन दिंदा पूर्ण तयारीका साथ दिनुपर्छ ।